Eyona nto ibalulekileyo abayili begraphic kwimbali | Abadali be-Intanethi
La yokungenisaancia de Los isifoñadiintsimbi gráficos a lo umbunguo de la Imbaliia de la umntuinto es tan Grande que unyana una de las utitshalaesiones que hayi ukubaían posiibles isono ellos. Ubugcisa bokuyila bunempembelelo enkulu kwinkcubeko yanamhlanje.
Ukwazi kunye nokwazi okuncinci malunga neyona nto ibalulekileyo abayili begraphic kwimbali kubalulekile xa kuziwa ekuthatheni iimbekiselo zokudala kunye noyilo, kuba uninzi lwamagcisa luphefumlelwe ngabo. Apha sikuxelela kancinci malunga nabo.
1 Eyona nto ibalulekileyo abayili begraphic kwimbali
1.1 NguSawule Bass
1.4 Paul irandi
1.5 UDavid Carson
1.6 UDeborah Sussman
1.7 UAlex Trochut
Senze ukhetho lwabayili begraphic abasixhenxe abaye babangela impembelelo enkulu kuluntu lwanamhlanje ngoyilo lwabo. Apha sikuxelela kancinci malunga nabo.
Saul Bass kwakunjalo un ilkunjaloirada y isifoñthanda gráfico EstadIsibizoidnape, omndeOso yi su trabigalikhi nge el cine kunye noyilo lwezinye zezazisi zeshishini ezibalulekileyo eUnited States. Wazalelwa eNew Haven, eConnecticut, ngoFebruwari 8, 1920 waza wasweleka eLos Angeles, eCalifornia, ngoAprili 25, 1996.
Umsebenzi wakhe wokuqala uquka ukuyila iipowusta bhanyabhanya zikaAlfred Hitchcock, Indoda eneGolden Arm, kunye nentombazana ayinakuyinceda. Kleenex, Minolta, Warner Communications, okanye AT&T.
Umthombo: Milton Glaser
UMilton Glaser wayengumzobi waseMelika kunye nomyili owaziwa kakhulu ngoyilo lwakhe lweerekhodi kunye neencwadi. Wayengumseki wePushPin Studios. Waseka iNew York Magazine. Wazinikela kuyilo lweepowusta, kubandakanya uBob Dylan owaziwayo, uyilo lwerekhodi, uyilo lokuhlela kunye nesazisi senkampani. Waphinda wayila amaphephandaba afana neLa Vanguardia. Olunye lolona yilo lwakhe ludumileyo yayiluphawu lwe-I Love New York. Wayesebenzela iimpapasho ezifana neParis Macht, L'Express, Esquire okanye iVice Village. Waba ngumzobi wokuqala ukufumana imbasa yeSizwe yoBugcisa.
Ngokuphathelele isimbo sakhe sinokuthi uguquguquka kakhulu. UMilton Glasser waziwa ngokuhambisa ngezinto ezimbalwa, inani elikhulu leekhonsepthi, kwisiqwenga esibonwayo esinye. Impembelelo yayo ivela kwiivanguards ezahlukeneyo kunye nobuchule, apho isicatshulwa kunye nomfanekiso zidibana khona.
Paula Scher es una yoyiloñadObona bugcisa bomzobo baseMelika baziwa kakhulu kwihlabathi. Ufunde uBugcisa obuBuchule ePennsylvania kwisikolo saseTyler soBugcisa e-Elkins Park. Wayengumlawuli wokuqala we-arhente yoyilo iPentagram, awayijoyina ngo-1991. usebenzele Umxhasies como Charles Bronson, Coca Cola, Shake Shack, Perry Ellis, iMyuziyam yoBugcisa bale mihla, The New abantu base-yorkers, Windows phakathi kwabanye.
Ngeminyaka yee-80, wavelisa isimbo sakhe, esaphefumlelwa yi-Art Deco kunye ne-Russian Constructivism. Uvelise intaphane yezazisi zenkampani ezifana neSixeko, kwaye uyile amaqweqwe eencwadi, ukupakishwa kunye neentengiso. Isimbo sakhe sinophawu olubalaseleyo kwaye uScher ubonisa ngeefonti, awakha ngazo imifanekiso enamandla kakhulu kunye nentsha.
Paul IRandi es uno de Los mI-ás omndeosos isifoñadiintsimbi gráficos de la Imbaliia. Ethiywe ngokuba ngutata woyilo lwale mihla lwegraphic, wayeyincutshe kuyilo lweempawu neelogo, y una de las ikhiwaneuras mI-ás ebalulekileyoes del isifohayi gráfico en Estados Unidwena. UPaul Rand wazalwa ngo-Agasti 15, 1914, eBrooklyn, eNew York. Wafunda eParsons Isikolo esitsha soYilo ngo-1932 nakwi-Art Students League ngo-1933. WayenguMlawuli woBugcisa kwimagazini i-Esquire. y ngu-Apparel Arts-GQ.
Ngokubhekiselele kwisitayile sakhe, sinokuthi i-modernist kunye nokusetyenziswa okugciniweyo kwe-typography kunye neemilo zejometri. UPaul Rand waphenjelelwa yindlela yaseJamani yeSachplakat kunye nemisebenzi kaGustav Jensen. Wenza izazisi zenkampani kwiinkampani ezidumileyo njenge-IBM, ABC, UPS, Enron, Next phakathi kwabanye.
Umthombo: David Carson
UDavid Carson ngumyili wemizobo waseMelika kunye nomlawuli wobugcisa. Wayengumlawuli wezobugcisa kwimagazini iRay Gun. Wazalelwa eTexas, eUnited States, ngo-1955. Enye yezinto awayezithandayo yayikusefa, apho wakwaziyo ukuba ngumdlali we-9 kwihlabathi liphela. Lo myili waziwa ngayo sungula ngokuchwetheza ngovavanyo kunye neendlela ezizezinye zokufota. Ukhethekile kuyilo lokuhlela kunye ne-audiovisual, nangona wayila iipowusta kunye neealbham zomculo.
Ukwafumene uqeqesho kumzobi wegraphic uHans-Rudolf Lutz, owaziwayo ngeentlobo ngeentlobo zoyilo kunye nokufunda kwakhe kwinkalo yokuchwetheza. Inxalenye yempembelelo kaCarson ivela kweli gcisa, ukongeza kwi-surfing, ukufota, inzululwazi yezentlalo kunye noyilo lwegraphic.
Wayengumyili waseMelika kunye novulindlela kwinkalo yoyilo lwemizobo yokusingqongileyo. Wazalwa ngoMeyi 26, 1931 eBrooklyn, eNew York. Waqala umsebenzi wakhe wobugcisa kwi-Art Students League eNew York, kamva wafunda kwiKholeji yaseBard eNew York. Ekugqibeleni, wayeya kuphumelela kuyilo lwegraphic kwiZiko loYilo laseChicago. Wasebenza kwisifundo sikaCharles noRay Fames. Udibanise uyilo lwegraphic kwizakhiwo zoyilo kunye nezoluntu.
Ngo-1968, wagqiba kwelokuba avule esakhe studio eSanta Monica. Eyasungulwa nguFrank Gehry noGere Kavanaugh, yayibizwa ngokuba nguDeborah Sussman & Co. Ngelo xesha, basebenze kwiiprojekthi eziphawulekayo ezingaphezu kwe-340. Uye wasebenzisana nabakhi bezakhiwo abanjengoPhilip Johnsons, uOlin noBarton Myers phakathi kwabanye. Enye yezona projekthi zakhe zidumileyo yayikukuyila inkangeleko kunye nenkangeleko yomhlaba woyilo lweeOlimpiki zasehlotyeni zika-1984 eLos Angeles.
Alexander trochut es uno de Los isifoñadiintsimbi gráficos kunye nokuchwetheza mI-ás ebalulekileyoes de nuimpembelelo payi. Ufunde e-Elisava, kwiYunivesithi yeSikole soYilo kunye nobuNjineli baseBarcelona. Comenzó hAngleisiphelo ilkunjaloubuhlangaiones for libros de umbhaloo y for agencias de kawonke wonkeinto. Su imotohlaziya se ha desarrollkokuchitha en ukubado el iyunifomuo, y Usebenzele iimpawu ezibalulekileyo, ezifana nemagazini yaseNew Yorker, Iincwadi zePenguin, iSaks Fifth Avenue, I-Nike, iPepsi, iPuma okanye iRolling Stones.
Wahlala ixesha elithile e-Barcelona apho wayene-studio yakhe yokuyila, kodwa ekugqibeleni waya eBrooklyn, apho asebenza khona kunye nepotifoliyo enkulu yabathengi.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ukudala kwi-intanethi » ngokubanzi » Ezahlukeneyo » Eyona nto ibalulekileyo abayili begraphic kwimbali
Molo, ndifumanisa ukuba ukhetho lwakho lunomdla kodwa lunocalucalulo, babiza kuphela abayili baseMelika. kwaye ihlabathi alikho nje i-US. kukho amazwe amaninzi ehlabathini.